Exide Paperless Warranty
एक्साइड ब्याट्रीको लागि पेपरलेस वारेन्टी 19 January 2021
एक्साइड ब्याट्री खरिदकर्ताहरुले वारेन्टीको विवरण सिप्रदी एपमा स्टोर गरेर सजिलै वारेन्टीको दावी गर्न सक्नु हुनेछ ।
एक्साइड ब्याट्रीको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. ले ग्राहकहरुको सहजतालाई ध्यानमा राखेर पेपरलेस वारेन्टीको सुरुवात गरेको छ । पेपरलेस वारेन्टी मार्फत् एक्साइड ब्याट्रीको वारेन्टी अवधिमा पाउने सुबिधाको लागि अब वारेन्टी कार्ड खोजि राख्नुपर्दैन । अब ग्राहकहरुले एक्साइड ब्याट्री खरिद गर्दा पाउने वारेन्टी सिप्रदी एप डाउनलोड गरी त्यसमा रेजिस्टर गरेर वारेन्टीको दाबी गर्न सक्नुहुनेछ ।
एक्साइड ब्याट्री नेपालका जेनेरल म्यानेजर सुरेश कुमार तिवारीका अनुसार, “एक्साइड ब्याट्रीलाई नेपालको नम्बर १ ब्याट्री बनाउनुमा हाम्रो ग्राहकहरुको ठुलो भुमिका रहेको छ । ग्राहकहरुको हामीप्रतिको उदारता र विश्वासले हामीलाई सधैं हाम्रा ग्राहकहरुको हितमा काम गर्ने उर्जा र हौसला प्रदान गर्दछ । त्यही कार्यलाई निरन्तरता दिदैं हामीले अहिले पेपरलेस वारेन्टीको सुरुवात गरेका छौँ ।
धेरै ग्राहकहरुबाट वारेन्टीको दावी गर्दा वारेन्टी कार्ड हराएको वा नभेटिएको गुनासो आइराख्ने भएकोले त्यस झन्झटबाट मुक्त हुन पेपरलेस वारेन्टीको सुरुवात गरेका छौँ । यसको प्रयोगले हाम्रा ग्राहकको साथै विक्रेताहरुलाई पनि सहज हुनेमा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।”
पेपरलेस वारेन्टी अन्तर्गत एक्साइड ब्याट्रीको वारेन्टी स्टोर गर्न, ग्राहकहरुले आफ्नो स्मार्टफोनमा सिप्रदी एप डाउनलोड गरेर, एक्साइड ब्याट्री वा वारेन्टी कार्डमा भएको QR कोड स्क्यान गरी रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ । यसको बारेमा थप जानकारीको लागि सिप्रदीको टोल फ्री नम्बर NCELL भए १६६००१५५७७७ वा एनसेल भए ९८०१५७५७७७ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।
पेपरलेस वारेन्टीबाट ग्राहकहरूले झन्झट रहित वारेन्टी सजिलै प्राप्त गर्न सकिने भएकोले यसलाई ग्राहकहरूले मनपराई दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा कम्पनी विश्वस्त रहेको छ ।
सिप्रदी एपमा एक्साइड ब्याट्री रेजिस्टर कसरी गर्ने ? क्लिक गर्नुहोस्